Wasiirka arrimaha gudaha oo ku baaqay in gurmad loo sameeyo dadkii ka barakacay Guriceel “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha oo ku baaqay in gurmad loo sameeyo dadkii ka barakacay Guriceel “SAWIRRO”
Munaasabad uu xilka kula wareegayay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo federaalka ah ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed “Odowaa” oo ay ka qeyb galeen Xoghayaha joogtada ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha, Hanti dhawrka guud, howlwadeenada Wasaaradda iyo xubno kale laguna qabtay Muqdisho ayuu hay’adaha samafalka ugu baaqay in dadkii ka barakacay Guriceel gurmad la gaarsiiyo.
Agaasimaha Maamulka iyo shaqaalaha ee Wasaaradda Arrimaha gudaha Mudane Nuur Maxamed Diiriye oo ku hadlayay magaca shaqaalaha ayaa u mahadceliyay Wasiirkii hore ee Wasaaradda, isagoo xusay in Wasiirka cusub ay la shaqeyn doonaan.
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax oo isna munaasabadda hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in Wasaaradda Arrimaha gudaha ay ka mid ahayd Wasaaradihii ay la xisaabtanka ku sameeyeen, uuna ku faraxsanyahay in uu goob joog ka noqdo munaasabadda xil wareejinta.
Wasiirkii hore ee Arrimaha gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay mudaddii uu xilka hayay, isagoo howlwadeenada uga mahadceliyay sida ay ula shaqeeyeen, kuna booriyay inay si taa la mid ah ay ula shaqeeyaan Wasiirka cusub.
Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa xusay inay jiraan howlo qabyo u ah Wasaaradda, kuwaasi oo ay ka midtahay dhismaha xaruntii hore ee Wasaaradda oo uu Wasiirka cusub kula dar daarmay in uu dib u dhis ku sameeyo, maadaama Wasaaradda Arrimaha gudaha ee Turkiga balan qaaday dhismaha xaruntasi.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed “Odowaa” ayaa ugu horeyn Wasiirkii hore uga mahadceliyay waxyaabihii u qabsoomay, isagoo intaa ku daray in uu dar dargelinayo hirgelinta Nidaamka Federaalka ah, dhameystirka mashaariicyada qabyada ah iyo dib u dhiska xaruntii hore ee Wasaaradda.
Wasiirka Arrimaha gudaha ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka dhacay magaalada Guriceel, isla markaana dadkii ka barakacay guryahooda dib loogu celiyo, isagoo hay’adaha samafalka ka codsaday inay gurmad beni’aadanimo la gaaraan bulshada ka barakacday degmada Guriceel.
Wasiirka amniga gudaha oo xilka la wareegay.SAWIRRO.